कसरी तपाईको आईफोनको IMEI पत्ता लगाउने आईफोन समाचार
पाब्लो अपारीसियो | | आईफोन, iTunes, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
त्यहाँ एक सम्भावना छ कि हामीले हाम्रो (वा अरू कसैको) मोबाइल उपकरण चिन्न आवश्यक पर्दछ। हामी कसरी यो गर्न सक्छौं? खैर, यसका लागि, र ध्यानमा राख्दै कि ब्लग लाई Actualidad आईफोन भनिन्छ, हामीले थाहा पाउनु पर्छ यस आईफोनको आईएमईआई के हो? कुनै पनि उपकरणमा उपलब्ध विधिको साथसाथै, एप्पलले हामीलाई यो कोड पाँच अलग-अलग तरीकामा फेला पार्न अनुमति दिन्छ।
IMEI कोडaको समावेश गर्दछ १ 15 अंकको कुल, केहि संख्याहरू जुन कहिलेकाँहि एक अर्काबाट अलग हुन्छन्, जसले हामीलाई यसलाई राम्रोसँग प्रतिलिपि गर्न मद्दत गर्दछ। IMEI नम्बर बनाउने तथ्या .्कहरू प्रयोग गरेर प्राप्त गरिन्छ Luhn एल्गोरिथ्म, वैज्ञानिक हंस पिटर Luhn द्वारा बनाईएको छ र जसको कार्य भनेको मानव त्रुटिहरूबाट बच्न को लागी हो जब यसलाई केही माध्यममा प्रस्तुत गर्दा जस्तै मोबाइल उपकरणमा। यस लेखमा हामी तपाईलाई यस महत्वपूर्ण कोड को लागी हुन सक्ने सबै शंका हटाउन कोशिस गर्नेछौं।
1 आईएमईआई के हो?
2 कसरी हाम्रो आईफोनको आईएमईआई पत्ता लगाउने
2.1 सेटिंग्स बाट
2.2 संख्यात्मक कीपैडबाट
2.3 आईफोन पछाडि हेर्दै
2.4 यो बक्समा हेर्दै
2.5 ITunes बाट
3 कसरी IMEI द्वारा आईफोन लक गर्ने
4 कसरी आईएमईआई द्वारा आईफोन अनलक गर्ने
5 के आईफोनको IMEI बदल्न सकिन्छ?
आईएमईआई के हो?
यदि मोबाइल फोनसँग इजाजतपत्र प्लेट छ भने त्यो लाइसेन्स प्लेट तपाईंको आईएमईआई हुनेछ। कोड एक फोनको आईएमईआई (अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल प्रणाली उपकरण पहचान) हो कोड जसले विश्वव्यापी रूपमा डिभाईसलाई उपकरणको पहिचान गर्दछ, र नेटवर्कमा उपकरण द्वारा यसमा जडान भएको बेला प्रसारित हुन्छ। यो कोड चोरी वा हानीको घटनामा टाढाको उपकरण लक गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसमा चोरले उपकरण प्रयोग गर्न सक्दछन जुन उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
कसरी हाम्रो आईफोनको आईएमईआई पत्ता लगाउने
हाम्रो IMEI पत्ता लगाउन सब भन्दा सजिलो विधि आईफोन सेटिंग्सबाट हो। यसका लागि हामी जान्छौं सेटिंग्स / सामान्य / जानकारी र हामी तल स्क्रोल गर्दछौं। हामी हाम्रो IMEI ब्लुटुथ ठेगाना (आईओएस .8.4.1..XNUMX.१ मा) अन्तर्गत देख्न सक्छौं।
IMEI पत्ता लगाउनुहोस् यस तरिकाले यसको अर्को फाइदा छ र त्यो हो, यदि हामी यसमा केही सेकेन्डहरू खेल्छौं भने हामी यसलाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्छौं जहाँ हामी चाहन्छौं।
यो विधि उस्तै हो कुनै पनि अन्य मोबाइल फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यो कहिले गरेका छौं र हामीले यो याद राख्यौं भने हामी यसलाई हाम्रो आईफोनमा पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं। संख्यात्मक किबोर्डबाट हाम्रो IMEI पत्ता लगाउन हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामी मा खेले कीबोर्ड.
हामी टाइप गर्छौं * # 06 #। नम्बर स्क्रिनमा देखा पर्नेछ।
छोड्नका लागि, हामीले ट्याप गरेका छौं OK.
आईफोन पछाडि हेर्दै
सरल, तर प्रभावशाली। यदि हामी हाम्रो आईफोनको आईएमईआई जान्न चाहन्छौं भने, हामीले भर्खर यसलाई घुमाउनुपर्नेछ र सानो प्रिन्ट हेर्नु पर्छआईफोन भन्छन् कि पाठ मुनि के छ। यदि हामी गलत सोच्दछौं भने हामी सोच्न सक्छौं कि केस परिवर्तन भएको छ, त्यसैले यो विधि हामीले चाहेको जस्तो विश्वासयोग्य नहुन सक्दछौं जबसम्म हामी आईफोन जहिले पनि हाम्रो अधिकारमा छैन भन्ने निश्चित छौं।
यो बक्समा हेर्दै
हामीसँग सँधै बक्स हुँदैन, पक्कै पनि होइन, तर हाम्रो आईफोनको आईएमईआई पत्ता लगाउने यो अर्को तरिका हो जुन काममा आउन सक्छ, विशेष गरी यदि हामीसामु यसको अगाडि छैनौं भने। केवल साइडको स्टिकर हेर्नुहोस् बक्स मुनि हाम्रो कोड फेला पार्न।
अन्तमा, हामी पनि गर्न सक्छौं ITunes बाट हाम्रो IMEI खोज्नुहोस्। यो विधि यो छैन कि यो अधिक गाह्रो छ, तर यो कम उपयोगी छ किनकि यो गतिमा देखिनेछ र हामीसँग यो वा कुनै पनि कुरा देखाउने समय हुँदैन। ITunes बाट हाम्रो कोड हेर्नको लागि हामी निम्न गर्दछौं।
कुञ्जी संग नियन्त्रण थिच्दा, हामी मेनूमा जान्छौं ITunes / ITunes को बारेमा.
हामी देख्नेछौं कि हाम्रो आईफोन डाटा देखा पर्नेछ र ती मध्ये आईएमईआई हुनेछ।
चेतावनीको रूपमा, तपाईंलाई यो याद दिलाउनुहोस् यो कोड तपाईंको उपकरणको महत्वपूर्ण जानकारी हो, त्यसैले तपाइँ कसैलाई आईएमईआई प्रदान गर्न छैन जबसम्म यो कडाई आवश्यक छैन। अवश्य पनि, यसलाई सामाजिक नेटवर्कमा कहिले प्रकाशित नगर्नुहोस्।
कसरी IMEI द्वारा आईफोन लक गर्ने
प्रयोगकर्ताहरू सक्दैनन् आईएमईआई द्वारा एक उपकरण लक गर्नुहोस्। यदि हाम्रो आईफोन हराएको वा चोरी भएको छ भने, हामीले हाम्रो अपरेटरलाई मद्दतको लागि सोध्नु पर्नेछ। यसका लागि कल गर्नु उत्तम हुन्छ, तर पहिला हामीले ब्लक गर्न चाहेको उपकरणको आईएमईआई पत्ता लगाउनुपर्नेछ। र यदि हामीसँग फोनमा पहुँच छैन भने हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं कि हाम्रो IMEI हो? खैर, सौभाग्यवश, हामीले यस लेखमा वर्णन गरेका आईफोनको आईएमईआई थाहा पाउनको लागि एउटा विधि यो छ। यो विधि संख्या: हो: हामीले केवल बाकस पत्ता लगाउनुपर्नेछ र तल स्टीकरमा हेर्नुपर्नेछ (एक पटक यो आफ्नो प्राकृतिक स्थितिमा रहेको छ)।
आईएमईआई दृश्यात्मकको साथ, हामीसँग मात्र हाम्रो अपरेटरलाई कल गर्नुहोस् र तपाईंलाई हाम्रो फोन लक गर्न सोध्नुहोस्। हाम्रो पहिचान प्रमाणित गर्न उनीहरूले पक्कै हामीलाई केही प्रश्नहरू सोध्ने छन् र हामी आईफोनको वैध मालिकहरू हौं जुन हामी ब्लक गर्न चाहन्छौं, तर यदि हामी वास्तवमै ब्लक गर्न चाहेको उपकरणका मालिक हौं भने यो समस्या हुनु हुँदैन।
जे भए पनि अवस्थित छ मेरो आईफोन खोज्नुहोस्आईएमईआई द्वारा मेरो फोन लक गर्नु अघि, म यसलाई पत्ता लगाउन कोशिस गर्दछु र पत्ता लगाउने व्यक्तिको साथ पनि सम्पर्कमा रहन्छु। यसको लागि यो पर्याप्त छ कि हामी जान्छौं icloud.com वा हामी अर्को आईओएस उपकरणबाट अनुप्रयोग पहुँच गर्दछौं। एक पटक भित्र हामी यो हराएको रूपमा कन्फिगर गर्न सक्दछौं, लक स्क्रिनमा एक सन्देश जोड्नुहोस्, यसलाई रोक्नुहोस् वा यसको सामग्री मेटाउनुहोस्। उत्तम, कुनै श doubt्का बिना, यस प्रक्रियालाई पछ्याउनु हो:
हराएको मोडमा आईफोन राख्नुहोस्।
लक स्क्रीनमा एक सन्देश जोड्नुहोस्। सन्देश संग धेरै सावधान रहनुहोस्। यो साह्रै आक्रमक हुनु उचित हुँदैन किनभने यो हामीबाट चोरी भएको हुन सक्छ र त्यसलाई फ्याँक्न, यसलाई भत्काउन वा कसलाई थाहा छ हाम्रो सन्देशको जवाफमा हामीलाई रिस उठाउनका लागि। मँ "हाय, तपाईसँग मेरो फोन छ" जस्तो लाग्छ। मलाई कल गर्दै। धन्यबाद "र, हुनसक्छ उसलाई भन्नुहोस् उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ।
यसलाई औंठी बनाउनुहोस्। "तेसैले?" तपाईं अचम्ममा परिरहनुभएको हुन सक्छ, र उत्तर यो हो कि हुनसक्छ जोसँग यो छ थाहा छैन। यो तपाईलाई मूर्ख लाग्न सक्छ, तर एक जनाले मेरो भाइको आईप्याडलाई प्रतियोगितामा राख्यो कि यो उसको हो भनेर सोध्यो, मेरो भाईले मलाई बोलाए, मैले यसलाई औठी बजायो र जसले यसलाई लिएकाले यसलाई आईप्याडको रूपमा गल्ती गरे। कुल, जो आफ्नो उठाउन र उसले गएकोले छोडेकोमा फर्कियो (अनुमान) गल्तीले।
माथिका सबैसँग, जोसँग हाम्रो आईफोन छ त्यो पहिल्यै थाहा छ हामीलाई थाहा छ तपाईंसँग हाम्रो फोन नम्बर छ र यो कहाँ छ। आशा छ, तपाईले हामीलाई यो फिर्ता गर्नुभयो र उपकरणले कार्य गर्न जारी राख्नेछ। यदि हामी यसलाई IMEI द्वारा ब्लक गर्छौं भने, आईफोन एक राम्रो पेपरवेट बन्न सक्दछ यदि यो आफ्नो वास्तविक मालिकमा फर्कन्छ भने।
कसरी आईएमईआई द्वारा आईफोन अनलक गर्ने
यद्यपि यो प्रति अपरेटरको रूपमा टेलिफोन किन्न सामान्य भइरहेको छ, यो अभ्यास अवस्थित रहनेछ। अधिक र अधिक उपयोगकर्ताहरू कम्पनीमा बाँधिएको भन्दा एउटा निःशुल्क फोन किन्न रुचाउँछन्, किनकि अन्तमा हामी अधिक पैसा तिर्दछौं। तर यो पनि सत्य हो कि सबैलाई जस्तै कोषएक उपकरण खरीद गर्न अपरेटरमा निर्भर रहनु राम्रो विचार हुन सक्दछ, जबसम्म हामीसँग यो एकचोटि किन्नको लागि पर्याप्त पैसा छैन वा यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रयास हुनेछ।
यी फोनहरू सामान्यतया हुन् एक कम्पनी संग जोडिएको र तिनीहरू केवल एक अपरेटर कार्डसँग काम गर्दछन् जहाँ तिनीहरू लिंक छन्। जब सम्म हामी यसलाई जारी गर्दैनौं। आईएमईआई द्वारा उपकरण लक गर्ने को रूप मा, एक आईफोन अनलक गर्न हामीलाई तेस्रो पक्षहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। एक राम्रो विकल्प एक हो हामी तपाईंलाई आईफोन समाचार प्रस्ताव गर्दछौं जुन एक लिबेरैफोनफोन सेवा हो। यो एकदम सत्य हो कि हामी सँधै घरमै सफा गर्ने छौं, तर त्यो यहाँ र प्याटागोनियामा छ, तर यो पनि साँचो हो कि एक आईफोन अनलक गर्न सबै भन्दा सामान्य मूल्य € 9.95 .3 is हो र यहाँ हामीसँग सस्तो € option विकल्प छ। अवश्य पनि, जब सम्म तपाईं रिलिज प्राप्त गर्न को लागी hours घण्टा कुर्नु मन गरेन।
आईफोन अनलक गर्न LiberaiPhoneIMEI हामीले भर्खरै सम्बन्धित बक्समा हाम्रो IMEI प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र PayPal बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, जसले हामीलाई भुक्तानी गर्नको लागि हाम्रो PayPal खातामा लैजान्छ। अनलकिंग तपाइँले छनौट गरेको अवधि भित्र लिनेछ। यदि तपाईले न्यूनतम प्राथमिकता छनौट गर्नुभयो जुन € 6,95 XNUMX of को मूल्य छ भने, यो दरले दर्साएको तीन घण्टा पछि सम्म यो बिर्सनु उत्तम हुन्छ। तीन घण्टा पछि, हामी नयाँ अपरेटरको कार्ड परिचय गर्दछौं र जाँच गर्दछौं कि हाम्रो आईफोनले काम गर्दछ फरक कम्पनीबाट सिम, त्यसैले हामी जान्छौं कि यो पहिले नै पूर्ण स्वतन्त्र छ।
के आईफोनको IMEI बदल्न सकिन्छ?
हो, तर एक बाट विन्डोज को पुरानो संस्करण। हामी किन एक फोनको IMEI बदल्न चाहन्छौं? हामी यो कोड परिवर्तन गर्न सक्दछौं यदि हामीले खरीद गरेका छौं पुरानो को आईफोन विदेशमा, किनकि हामीले हाम्रो देशमा अमान्य संख्याको साथ केहि प्राप्त गर्न सक्दछौं। अवश्य पनि, मँ आईफोनले कुनै समस्या दिदैन भने केहि पनि छुने सिफारिस नगर्न सक्छु। त्यो हो, हामी "यदि यसले काम गर्दछ भने, यसलाई नछोनुहोस्" गर्नेछौं।
आईफोनको IMEI बदल्नुहोस् यो एक साधारण प्रक्रिया हो जुन प्रोग्रामलाई धन्यवाद दिइन्छ जिफोन। हामी निम्न चरणहरू प्रदर्शन गरेर गर्छौं:
हामी ZiPhone डाउनलोड गर्नुहोस्।
हामी अघिल्लो चरणमा डाउनलोड गरिएको फाईल अनजिप गर्छौं र यसलाई डेस्कटपमा छोड्दछौं।
हामी विन्डोज स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्दछौं, रन खोल्नुहोस् र "सेमीडी" टाइप गर्नुहोस् कोट्स बिना।
हामीले "सीडी डेस्कटप / ziphone", उद्धरणहरू बिना, खोज क्षेत्र मा र इन्टर थिच्नुहोस्।
हामी आईफोनलाई कम्प्युटरमा जोड्दछौं।
हामीले फोनलाई DFU मोडमा राख्यौं। यसको लागि हामी एप्पल लोगो नदेएसम्म हामी पावर बटन र होम बटन थिच्दछौं, त्यसपछि हामी पावर बटन रिलीज गर्छौं र हामीले केबलको साथ आईट्यून्स लोगो नदेखाएसम्म होम बटन होल्ड गर्दछौं।
हामी "Ziphone -u -ia 123456789012345" (सधैं उद्धरण बिना) आदेश अनुरोधमा लेख्छौं। हामीले IMEI नम्बरहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ जुन हामी अघिल्लो कोडमा चाहन्छौं।
हामी zibri.tad फाईल फेला पार्नका लागि प्रोग्रामको लागि प्रतिक्षा गर्छौं र पुन: सुरु गर्दछौं। एक पटक सुरू भएपछि, हामी पहिले नै नयाँ IMEI प्रयोग गर्दैछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iTunes » कसरी तपाईको आईफोनको IMEI पत्ता लगाउने
यदि तपाईं सिम भण्डार गरिएको ट्रे हटाउनुहुन्छ भने, तपाईंले IMEI र तपाईंको आईफोनको सिरियल नम्बर सुनमा कोरिएको देख्नुहुनेछ 😀
Helloz लाई जवाफ दिनुहोस्
Helloz IPHONE4 को लागी तपाइँको उत्तर मान्य छ
नमस्ते कस्तो छ? के कसैलाई थाहा छ नकारात्मक ब्यान्डबाट आईफोन कसरी निकाल्ने? वा तपाईंलाई थाहा छ यदि अर्को देशमा तपाईं नकारात्मक ब्यान्डबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ?
धेरै धेरै धन्यबाद मलाई थाहा भएन यदि ट्रेमा imei सही थियो तर मैले पहिले नै फेरी धन्यवाद फेला पार्न सक्छु
मसँग आईफोन5छ र मैले # 06 ० # डायल गरें कि यो ह्याक गरिएको छ कि भनेर हेर्नका लागि र यसले फोनको सामान्य IMEI नम्बरको सट्टा ००००००००० देखाउँदछ। तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यसको मतलब के हो?
जोस लुइस रोजास भन्यो
आईफोनमा फर्केर हेर्दै
होसे लुइस रोजालाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो गार्सिया ल्लोरिया भन्यो
महिनाको Chorarapost उम्मेदवार
पाब्लो गार्सिया ल्लोरियालाई जवाफ दिनुहोस्
एडविन अझोकर जी भन्यो
धेरै उपकरणहरू पछाडि imei छ। तर म सिफारिश गर्दछु कि # # 06 # किनकि चिनियाँहरू धेरै संसाधन छन्। यस तरिकाले उपकरणको वास्तविक आईमीआई जान्न सुरक्षित छ।
एडविन अझोकर जीलाई जवाफ दिनुहोस्
जेभियर कामाचो भन्यो
सिम ट्रेमा, यदि यो परिवर्तन गरिएको छैन भने ...
Javier Camacho लाई जवाफ दिनुहोस्
जेफरसन डोमिue्ग भन्यो
कसैलाई थाहा छ यसलाई कसरी बदल्ने?
Jefferson Dominguez लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो मोबाइल फोन हरायो र मसँग बाकस छैन भने म कसरी आफ्नो आईएमआई देख्न सक्दछु। मद्दत
मारिया एरिजा भन्यो
यदि मलाई मेरो आईएमईआई थाहा छैन र मेरो सेल चोरी भयो। म कसरी IMEI लाई चिन्ने छु र फोन ब्लक गर्न वा यसलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुने?
मारिया एरिजालाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी म पासवर्ड बिना आईप्याड अनलक गर्न सक्नुहुन्छ?
वा आइप्याडको imei लाई कसरी रोक्न सक्छु, यो रोकेर?
एरियालाई जवाफ दिनुहोस्